प्रधानमन्त्री मोदीको मेकअपमा प्रत्येक महिना ८० लाख खर्च !
आजको न्युज शनिबार, २८ वैशाख २०७६
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक सेयर भइरहेको छ ,उनको मेकअपमा प्रत्येक महिना ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ भन्दै । करिब ४५ सेकेण्डको यो भाइरल भिडियोमा केही ब्युटिसियन र प्रधानमन्त्री मोदी देखिन्छन् । फेसबुक र ट्विटरमा यो भिडियो हजारौ पटक हेरिसकिएको छ । सयौं पटक यो भिडियो शेयर भएको छ ।
अधिका‌श मानिसहरुले सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियो हेरेपछि लेखेका छन्, ‘यो हो गरिबको छोरा, मेकअप गर्दैछ । आरटीआइको माध्यमबाट खुलासा भएको छ की उसको श्रृंगारका लागि व्युटिसियनको ८० लाख रुपैयाँ प्रति महिना भुक्तान गरिन्छ ।’
यस दावीसंगै कांग्रेसको आधिकारिक फेसबुक पेजमा पनि पोस्ट गरिएको छ, जुन लगभग ९५ हजार पटक हेरिएको छ । तर हाम्रो अनुसन्धानमा हामीले फेला पार्यौकी भिडियो सही छ, तर यसलाई गलत सन्दर्भसँग साझेदारी गरिएको छ। साथै, भाइरल भिडियोमा भेटिएका व्यक्तिहरू मोदीका व्यक्तिगत मेकअप कलाकार होइनन्।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मेकअपको भिडियो बनाउनको लागि भिडियो वास्तवमा मार्च २०१६ को हो। यो भिडियो लन्डनमा आधारित म्याडम तुसुद संग्रहालयद्वारा रिलीज गरिएको थियो। मद्रासुसुदको संग्रहालयले यस भिडियोलाई आफ्नो आधिकारिक यूट्यूब पेजमा पोस्ट गरेको थियो । म्याडम तुसाद म्यूज़ियमका अनुसार यो भिडियो प्रधानमन्त्री मोदीको मैनको प्रतिमाको नाप लिने बेलामा सुट गरिएको हो । म्याडमसुसु संग्रहालयबाट २० जना कालीगढहरूको टोली दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीको निवास पुगेको थियो, जसलाई चार महिनाको लागि प्रधानमन्त्रीको मूर्ति तयार भएको थियो।
भाइरल भिडियोमा मोदीसँग भेट्ने व्यक्तिले म्याडम टुसुद संग्रहालयका कलाकारहरू छन्, कोही पनि व्यक्तिगत श्रृङ्खला कलाकार होइनन्। म्याडम टुसुद संग्रहालयको अनुसार, मोदीको प्रतिमा २८ अप्रिल २०१६ मा लण्डनको संग्रहालयमा स्थापना गरिएको थियो।
आरटीआईको सत्य के हो ?
पीएमआईको आधिकारिक वेबसाइटमा आरटीआईको कुनै पनि उपस्थित छैन, जो सामाजिक मीडियामा प्रम मोदीको आधारमा आरटीआईको आधारमा साझा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री भारतको आधिकारिक वेबसाइटकाअनुसार, मान्छेले मोदीको शैक्षिक योग्यता, उनको छुट्टियाँ, अफिसको वाइफाइ गति र आरटीआई मार्फत दैनिक तालिकासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोधिएको छ। तर, वेबसाइटमा दिइएको सूचीले प्रधानमन्त्रीको मोदीको मेकअपको प्रश्न समावेश गर्दैन।
०१८ मा प्रकाशित केही मीडिया रिपोर्टहरूका अनुसार मुद्रण गरिएको थियो, गत वर्ष आरटीआई कार्यकर्ताले सोधेका थिए कि १९८८ देखि भारतको प्रधानमन्त्री भएका मानिसहरूको लुगामा कति सरकारी व्यय खर्च गरियो ? प्रतिक्रियामा, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भनेका थिए कि जानकारी खोज्नु व्यक्तिगत जानकारीको कोटीमा आयो र यसको कुनै आधिकारिक रेकर्ड थिएन।
प्रकाशित मिति: शनिबार, २८ वैशाख २०७६